Uurka leh - 1177
Graviditet - somaliska
Dhiigkarka yimaada xilliga uurkaHavandeskapsförgiftning - somaliska
Havandeskapsförgiftning (dhiigkarka yimaada xilliga uurka) waa cudur aad qaadi karto markaad uurka leedahay. Waxaad yeelanaysaa dhiig kar. Taasi ayaa adiga iyo ilmahaba saameyn karta. Si cadaadiska dhiiggaaga loogu dejiyo waxaad u baahan kartaa nasasho iyo dawo lagu siiyo.
Foosha iyo xanuunka foosha Sammandragningar och värkar - somaliska
Ilmo-galeenku waxa weeye muruq. Mararka qaar ayuu ilmo-galeenku xilliga uurka dhuujismaa/giigsamaa. Waxa tan loo yaqaannaa fool (sammandragningar). Marka la gaadho wakhtigii umusha ayuu sidoo kale ilmo-galeenku giijismayaa. Waxa tanna loo yaqaannaa xanuunka foosha.
Khamriga iyo uurka Alkohol och graviditet - somaliska
Khamri ha cabin markaad uurka leedahay. Waxa khamriga ku jira maadooyin khatar ah oo ilmaha caloosha ku jira dhaawici kara. Dumarka ay ku adagtahay inay cabitaanka khamriga joojiyaan ayaa taas laga caawimo karaa.
Tubaakada iyo uurka Tobak och graviditet - somaliska
Waxyeelo ayay kuu keeneysaa haddii aad tubaakada isticmaasho markaad uurka leedahay. Ilmaha uurka ku jira ayaa maadooyin khatar ahi ka soo gaadhi karaan tubaakada. Sidaas darteed tubaako ha isticmaalin markaad uurka leedahay. Haddii ay kugu adagtahay inaad joojiso ayaa taas lagaa caawin karaa. Waxyaalaha ay tubaakadu ku jirto waxa ka mid ah sigaarka
Booqashada xarunta umulisada Besök på barnmorskemottagningen - somaliska
Markaad uurka leedahay ayaad booqan doontaa xarunta umulisada. Waxa ay ujeedada booqashadu tahay si loogu eego sidaad adiga iyo ilmaha uurka ku jira aad tihiin. Waxa lagu siin doonaa talo iyo gargaar ku wajahan sidii aad dhalmad iskugu diyaarin laheyd. Booqashadu waa kuu bilaash.
Miyaad uur leedahay mise dhawaan ayaad ilmo dhashay? Rayigaaga/Ereygaaga ka dhiiboGravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd - somaliska
Video: POX (Qalabka cabbirka ogsijiinta dhiigga)Film: Mäta syremättnaden i barnets blod, POX - somaliska
Video: Astaan cagaarshow, joonis ama indhacaseeyeFilm: Kontroll av gulsot på nyfött barn - somaliska
Ilmo soo rididdaAbort - somaliska
Video: OAE (Cabbirka maqalka)Film: Hörselprov, OAE - somaliska
Video: Sonkorta dhiiggaFilm: Kontroll av blodsockernivån på nyfött barn - somaliska
Video: Naas-nuujinFilm: Amning - somaliska